Uxhumano iKhabhinethi - China Chao Yu Imishini
Uxhumano iKhabhinethi, esisetshenziselwa ukuhlanganisa panel obandayo, plug-in, i-plug-in ibhokisi, uphiko electronic, idivayisi kanye izingxenye mechanical futhi izingxenye, ukuze ibhokisi ukufakwa. Ngokusho uhlobo zamanje, iseva iKhabhinethi, udonga iKhabhinethi, inethiwekhi iKhabhinethi, iKhabhinethi ejwayelekile, ohlakaniphile umnyango uhlobo iKhabhinethi ongaphandle nokunye. Amanani Umthamo aphakathi 42U futhi 2U.
isakhiwo Simple, operation elula, bewumsebenzi ezijabulisayo, usayizi eqondile, ezongayo okusebenzayo;
- international ethandwa ezimhlophe ingilazi omnene emnyango ongaphambili;
Uhlaka engenhla nge izimbobo ukupholisa isiyingi;
Futhi kungenziwa zezikhali sizikhandle emhlabeni umnyango futhi umnyango ezingemuva;
- ukuqedela izesekeli ozikhethela.
I iKhabhinethi inethiwekhi yakhiwa uhlaka kanye nekhava (umnyango), okuyinto ngokuvamile has simise elingunxande, futhi ibekwe phansi. Inikeza indawo efanelekayo nokuvikeleka operation evamile zikagesi. Lena kuphela ngemva ezingeni uhlelo umhlangano. IKhabhinethi ukuthi akanayo isakhiwo avaliwe ibizwa ngokuthi uhlaka.
inethiwekhi Early iKhabhinethi ikakhulu Ukusakaza noma engela ngokusebenzisa screw, isipikili ixhunyiwe noma ashiselwe ku ifreyimu iKhabhinethi, futhi wenziwe mncane steel plate ikhava (umnyango) futhi. Lolu hlobo iKhabhinethi likhulu, besiyoba sikhulu, elula, sekuqediwe. With ukusetshenziswa transistors, izifunda edidiyelwe kanye izingxenye ezihlukahlukene, amadivayisi we icwecwe ultra, isakhiwo iKhabhinethi futhi ezincane, amabhlogo wokwakha of indlela yokuthuthuka. IKhabhinethi inethiwekhi iye yaba uchungechunge ipulaki nezisekelo nge usayizi othile. Faka ebhokisini, plug-in inhlangano ilungiselelo yelungiselelo evundla mpo lwezigaba ezimbili. Indaba inethiwekhi iKhabhinethi ngokuvamile isebenzisa mncane steel plate, uhlobo kwesigaba ukuma kuhlinzwa kwesigaba ngasinye, iphrofayli aluminium futhi amapulasitiki ahlukahlukene ubunjiniyela, njll .. Ngo
isikhathi Iposi: Jan-17-2018